ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် နိုင်ငံရေးစင်ပေါ် ရောက်လာခြင်း – Lt-Gen Wai Lwin goes to Parliament – MoeMaKa Burmese News & Media
ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၂
(Moemaka file photos)
နေပြည်တော်က ပြုလုပ်နေသည့် ရာထူး အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းတချို့ ပြင်ပသို့ ကြိုတင်ပေါက်ကြားနေသည်။ ထိုသတင်းများအနက် ချောင်ထိုးခံထားရသည့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် နေရာကောင်းရလိမ့်မည်ဟူသော သတင်းလည်း ပါဝင်သည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသည်ဟု သတင်းထွက်နေကြောင်း အလဲဗင်းမီဒီယာ၏ Facebook တွင် တနင်္လာနေ့က ရေးသားထားသည်။
စာဖတ်သူ တချို့က ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင်သည် လွှတ်တော်အမတ် မဟုတ်သဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်။
နောက် ၂ ရက်အကြာ ဗုဒ္ဓဟူး ညနေပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင်ကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်သို့ ပို့လိုက်ကြောင်း အစိုးရက တရားဝင် ကြေညာလိုက်လေသည်။
ထိုကြေညာချက်ကြောင့် ပေါက်ကြားထားသည့် သတင်းက ပိုမိုခိုင်မာသွားသည်။
သူ့အား လစ်လပ်တော့မည့် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် နေရာတွင် “အစားထိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုပါတယ်” ဟု DVB သတင်းတပုဒ်တွင် ယနေ့ ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
မည်သို့ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမည်နည်း
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် လစ်လပ်မည့် ၀န်ကြီးချုပ်နေရာအတွက် အဆိုပြုရွေးချယ်ရမည့်သူမှာ တဦးတည်းသာ ရှိသည်။ ထိုသူမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းစိန် ရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အမည်ကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ရမည်။
လွှတ်တော်က သဘောတူလျှင် ဦးသိန်းစိန်က ထိုကိုယ်စားလှယ်ကို တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးရမည်။
ဤသည်မှာ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်က သမ္မတ ပြောသမျှ သဘောတူမည်သာ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
၁။ သမ္မတ ရွေးချယ်လိုက်သည့်သူသည် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တယောက်တွင် ရှိရမည့် “အရည်အချင်းများနှင့် မပြည့်စုံကြောင်း အထင်အရှားမပြနိုင်ပါက” ငြင်းပယ်ခွင့် မရှိဟု အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သမ္မတကလည်း ထိုသို့သောသူကိုသာ အဆိုပြုမည် ဖြစ်သည်။
၂။ လွှတ်တော်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်၊ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တို့က ကြီးစိုးထားသည်။ သူတို့အားလုံး တသံတည်းထွက်မည်။ ကန့်ကွက်သူက အနည်းစုသာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမလား
သေချာပေါက် ဖြစ်လာမည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကို တိုင်းအဆင့်လွှတ်တော်သို့ ပို့ခြင်းမှာ တာဝန်ကြီးကြီး ယူနိုင်ရန် စစ်တပ်က ပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တာဝန်ကြီးကြီး မပေးပါက သူ့အား အပြစ်ပေး အရှက်ခွဲသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေမည်။
ထို့ပြင် သမ္မတ နှင့် စစ်တပ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်တော့မည်။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ဘယ်သူလဲ
များပြားလှသော မြန်မာပြည်မှ ဗိုလ်ချုပ်များစွာထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင်အကြောင်း ခန့်မှန်းချက်တချို့တော့ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်သန်းရွှေ မွေးထားခဲ့သူ သို့မဟုတ် စိတ်ချ အားကိုးရသူတဦးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူက ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့သည်။ နေပြည်တော်တည်ပြီးနောက်ပိုင်း နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို အရေးပါသော နေရာ ၂ ခုကို ကိုင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းက ထိုသတင်းမှန်ကန်ကြောင်း ပြဆိုနေသည်။
စစ်တပ်အတွင်းရေးများ ပါဝင်သည့် စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင်၏ ဖခင်သည် မဆလခေတ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးအေးမောင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ကျေးဇူးပြုဖူးကြောင်း၊ ထိုအချိတ်အဆက်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ရာထူး ခုန်တက်ပြီး နေပြည်တော်တွင် တိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် နှင့် ဇနီး ဒေါ်ဆွေဆွေဦး၊ သားသမီးများဖြစ်သော ဦးဝေဖြိုး၊ ဒေါ်လွင်ယမင်းတို့၏ အမည်များသည် ပြည်ပမှ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသည်။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင်၏အရွေ့သည် စစ်အရာရှိများ လွှတ်တော်တွင်း ပုံစံ ၂ မျိုးဖြင့် ရောက်လာကြခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခုသာ ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်က အကွက်ချသည့်အတိုင်း သူ ၀န်ကြီးချုပ် ရာထူး ရသွားလျှင်လည်း ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာဦးမည် မဟုတ်ချေ။
ထိုကိစ္စမှန်သမျှမှာ အခြေခံဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု အစိုးရ နှင့် အစိုးရဘက်တော်သားများက ဆိုလိမ့်မည်။
လွှတ်တော်တွင်း၊ လွှတ်တော်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကလည်း ထိုရာထူးအပြောင်းအလဲနောက်သို့ များစွာ အာရုံစိုက်ကြမည်မဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။
ထို့ပြင် သမ္မတသည် မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းများ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များကြောင့် လက်ခုပ်သံအများအပြား ရရှိထားသူ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်တပ်နှင့်ပေါင်းပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကို ရာထူးကြီးတနေရာပေးခြင်းကြောင့် များစွာ ငြိုငြင်ခံရဖွယ်မရှိဟု ယူဆရပါသည်။
← အခွင့်အရေးလေး ရတုန်းမို့ပါ
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲ →
“ဒီပြဿနာဟာ မကြာခင်မှာ ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်” – talk with Win Htein
April 22, 2012 April 22, 2012 Yan Lo Kywe
ငြိမ်းချမ်းအေး – မြင်းခြံ လူထု စစ်တမ်း
မန္တလေးတိုင်းNLD က ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူမိဘပြည်သူများအား ဂုဏ်ပြု
April 25, 2012 April 25, 2012 Yan Lo Kywe
3 thoughts on “ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် နိုင်ငံရေးစင်ပေါ် ရောက်လာခြင်း – Lt-Gen Wai Lwin goes to Parliament”
Ye Sint says:
Lt.Gen Wai Lwin’s father name is U Mya Than from Irrawaddy devision and he wasafarmer .
Why is he attending Parliament withagun?
Why & What is he afraid of?
I don’t agree that he becomes Yangon GPM.
NAY PYI TAW, Burma – A retired general, widely seen asahardliner, has been nominated to be vice president,amilitary official said Tuesday (June 10th).
Burma regime hardliner becomesamonkThailand warns of ‘threats’ by alleged Karen drug lord Speaking to reporters in the capital, Brigadier General Wai Lin said that Myint Swe, 61, was selected by the military representatives who make upaquarter of the country’s legislature. If the nomination goes through, he will replace Tin Aung Myint Oo, who retired due to ill health.
According to the BBC, Burma observers do not expect him to alter the reformist course Burma has taken under the current president, Thein Sein.